Singapore: Manamafy ny fepetra miady amin’ny fanariana fako eny an-dalambe ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2010 3:38 GMT
Avy amin'ny pejy Flickr-n'i xcode
Na dia misy aza ireo lalàna henjana mandràra ny fanariana fako eny an-dàlana any Singapore, mbola miakatra ihany ny isan'ireo mpandoto nandritra ireo taona vitsivitsy farany teo, ka nanery ny governemanta any Singapore hanamafy ny fanentanana amin'ny tsy fanariana fako eny an-dalambe. Hisy fanentanana ho fanomezana henatra mahery vaika kokoa hatao ary hisy ireo “Masoivohon'ny fahadiovana” hofanina.
Mino i Tan Kin Lian fa tokony hiverina ho fiaraha-monina “mahatehotia” i Singapore
Fiaraha-monina “mahatehotia” i Singapore taloha. Misy ny lamandy ho an'ny fanariana fako eny an-dalambe sy ny fiampitàna arabe tsy ara-dalàna. Nivahavaha izany nandritra ireo folo na roampolo taona farany teo.
Mandray fepetra ny masoivoho mpiaro ny tontolo iainana ankehitriny hifehezana ny fanariana fako an-dalambe. Fotoana andraisana fepetra izao hanamafisana ireo endrika hafan'ny fampiharana ny lalànantsika, toy ny fiampitàna arabe tsy ara-dalàna sy ny fanaovana hafetsena. Mila miverina amin'ny fiaraha-monintsika mahatehotia sy milamina isika.
Gaga i Rex fa hoe handany 12 tapitrisa dollars ny governemanta ho an'ny fanentanana amin'ny tsy fanariana fako eny an-dalambe
Tena gaga aho androany raha namaky fa handany ROA AMBIN'NY FOLO TAPITRISA DOLLARS ny governemanta ho an'ny fanentanana hanafoanana ny fahazarana manary fako eny an-dalambe. ROA AMBIN'NY FOLO TAPITRISA DOLLARS. Andriamanitra ô. Ireo gazety efa manan-karena, ireo orinasan'ny haino amanjery lehibe, no tsy hisalasalana fa hahazo tombony be indrindra, amin'ny fanaovana pejina dokam-barotra, sy ny famoronana horonantsary ara-barotra halefa amin'ny fahitalavitra amin'ny ora be mpijery.
Manoratra i Chee Ming fa tokony hampahatsiahivina ihany koa ny momba ny fanentanana ireo mpiasa vahiny, izay manome ny 20 isan-jaton'ny mponin'i Singapore.
Hafahafa ihany hoe mila manamafy ny lalàna hanafoanana ny fanariana fako eny an-dalambe isika nefa manana dabam-pako manerana an'i Singapore. Mieritreritra aza aho fa i Singapore no manana salan'isan'ny dabam-pako avo indrindra mifanaraka amin'ny isan'ny mponina.
Satria isika efa nampianarina tsara hatramin'ny fahazazàntsika tsy hanary fako etsy sy eroa, amiko dia ireo mponin'i Singapore tsy nahazo fianarana ampy, tsy notenenina, na izy roa no tena kendren'io fanamafisan-dalàna amin'ny tsy fanariana fako etsy sy eroa io. Hay, aza adino koa ny 20 isan-jaton'ny mponina antsointsika hoe “mpiasa vahiny”.
Manontany tena i Uncle Sha hoe nahoana ny olana momba ny fako no ataon'ny haino amanjery lohateny lehibe.
Amiko manokana dia tsy mendrika ny hatao lohateny lehibe mihitsy ity lohahevitra amin'izao fotoana ity.
Ary ahoana ireo olana any an-toerana toy ny tsy fitoviana eo amin'ireo mpiasa be karama sy kely karama, ny fiakaran'ny isan'ireo tsy manan-kialofana any Singapore, sy ny sisa.
Fantatro fa miezaka ny mampita ny hafatra amintsika namin'ny tsy hanariana fako imasom-bahoaka etsy sy eroa ny NEA [Fikambanam-pirenena ho an'ny tontolo iainana], nefa tsapako fa ny ankamaroan'ireo mpandoto ireo dia ireo Talenta Vahintsika sy ireo Mpiasa Vahiny.
Trial of tears dia manolotra fepetra vitsivitsy hanomezana henatra ireo mpandoto ireo
a) …avoaka ny adiresin'ireo mpandoto ary omena alalana ny vahoaka hanary fako ao amin'ny tranon'ilay mpandoto mandritra ny herinandro iray.
b) Aza sazy ihany no omena ireo mpandoto. Aleo asaina mitondra “pancarte” lehibe ry zareo miantona amin'ny tendany ary asaina mitsangana any amina toerana be mpandalo hanambara ny asany tsy manaja ny fiaraha-monina. Avoahy amin'ny Facebook koa ny mombamomba azy ho hitan'ny rehetra.
c) Raha izaho manokana dia ity iray ity no tiako. Asaivo miasa any amin'ny toerana fandoroana fako na fanodinana sakafo mandritra ny herinandro iray izy hahenoany tsara ny haratsin'ny fofom-pako. Ho hitantsika eo hoe hanao ahoana ny fitiavan-dry zareo ny fofona tsy maintsy zakain'ireo mpanadio. Tsaratsara kokoa aza dia alefa miasa any amin'ny orinasa mpanodina ny maloton'olombelona ry zareo.
d) Asaivo iantohan'ireo mpandoto ny vidin'ny fanadiovana herintaona ny faritra nolotoiny. Eny, tsy maimaim-poana ny fandotoana. Misy vola vidiny tafiditra anatin'izany.
Ny fanentanana amin'ny tsy fanariana fako dia niteraka adihevitra momba ny hoe tokony homelohina ve sa tsia ireo mpiasa vahiny amin'ireo olana momba ny loto any Singapore. Niha-nafàna ny adihevitra taorian'ny tondra-drano mahery tany Singapore tamin'ny herinandro lasa, miaraka amin'ireo mpampiasa aterineto sasany manameloka ireo mpiasa vahiny amin'ny fivangongoan'ny fako ao an-tanàna. Mandritra izany, mampatsiahy ireo mponina ao Singapore ireo mpiasa vahiny fa tsy tokony hanatsiny ny fidiran'ireo vahiny ho antony tokana fotsiny ny mponina amin'ny fiharatsian'ny fahalotoan'ny tanàna.